Iphepha Elingundoqo - Gpedia, Your Encyclopedia
Sele sinezihloko zamaphepha ezingama-1 184 ngoku esiXhoseni.
Masingen' enkomeni, singaphozisi maseko. Ubuchule bokwenza iWikipedia ekhonza uluntu kwihlabathi jikelele iyasikhuthaza ukuba sizame ukuphuhlisa ulwimi lwesiXhosa. Uluntu oluthetha isiXhosa luthe saa kwihlabathi liphela nangona uninzi lwethu luqukene eMzantsi-Afrika. Siyanimema nonke, mawethu, thathani inxaxheba ekwakheni isiXhosa kwelinxiwa siliphiwa kulo mqulu iWikipedia. Ukwenza njalo kuyakukhuthaza uluntu kwihlabathi jikelele ukuba lufunde ulwimi lwesiXhosa, nto leyo eyakukhuthaza udlelwano nezizwe ngezizwe rhwelele.
Afar · Akan · አማርኛ · Bamanankan · Chi-Chewa · Ɛʋɛ · Fulfude · Luganda · هَوُسَ · Otsiherero · Ìgbo · Kanuri · Kongo · Kuanyama · Gĩkũyũ · Malagasy · Malti · Lingala · Kinyarwanda · Oromoo · Kirundi · Sängö · chiShona · Soomaaliga · Kiswahili · ትግርኛ · chiTumbuka · Twi · Oshiwambo · Wolof · Yorùbá · List all
(Xa ufuna ukujonga ezinye iilwimi zeWikipedia, jonga kuludwe olusecaleniedias)
Retrieved from "https://xh.wikipedia.org/w/index.php?title=Iphepha_Elingundoqo&oldid=31450"